दुर्लभ दाहिने शंखको दर्शन गर्दा पनि मिल्छ चमत्कारी लाभ – Wow Sansar
January 3, 2021 80
तपाई भाग्यमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ रु गर्नुहुन्छ भने भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि यसको महत्व जानी शेयर गर्नुहोला जिवनमा धन, सम्पती र खुसी पाउँनुहुनेछ ।
तपाईलाई सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ कि संसारमा ५० हजार भन्दा धेरै प्रकारका शंख पाइन्छ ।त्यहि ५० हजार मध्यमा कुनै प्रकारको शंख तपाईको घरमा हुन सक्छ। ती शंख मध्य केहि दस शंखका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो।
यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरिन्छ ।शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो यसका बारेमा त सबैंलाई जनकारी छ । जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ।
प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो । धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ।
नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ । शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ ।लाखौं शंखमा दाहिना शंख एउटा पाइन्छ ।
हिन्दू धर्ममा प्रयोगृसम्पादन गर्नेरामायण, महाभारतमा शंखको महिमा प्रसस्त छ भने हाम्रो समाजमा मंगल कार्यदेखि मृत्युजन्य शोकको घडीमा समेत शंखवादनलाई महत्त्व दिइन्छ । शंख बजाउँदा त्यसको ध्वनिले विभिन्न प्रकारका रोगाणु र विषाणुलाई मार्ने वर्णन ऋग्वेदमा छ ।
जुन धन प्राप्तको लागि शुभ शंख मानिने गर्छ।मध्यावर्ति शंख यस अतभुत शंख स्धेरै दुर्लभ मानिने गर्छ। यस शंखको मुखको बीचमा खुल्ला भाग रहेको हुन्छ। तपाईको सम्पूर्ण अभिलाषा पुरा गर्न यस शंख उपयोगी रहने गर्छ।
Prevघा-उ पाकेकाे बेलामा जुकालाई चुसाउँदा पनि निकाे हुन्छ, यस्ताे रहेछ तरिका !
Nextदूध र यस्ता चिज सँगसँगै खाने गम्भीर गल्ती गर्दै नगर्नुस्, बर्बाद हुनबाट जोगिनुस् ! [जनचेतनाका लागि सक्दो सेयर गरौँ]
विवाहको वर्षगाँठमा श्रीमतीलाई चन्द्रमामा जग्गा उपहार